काठमाडौं मा नसोचेको घटना भयो ! कस्तो छ ६ जनाको अवस्था ? आयो यस्तो खबर
HomeNewsकाठमाडौं मा नसोचेको घटना भयो ! कस्तो छ ६ जनाको अवस्था...
११ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०८:५० काठमाडौं l कलंकीमा कारले मोटरसाइकल र स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा चालकसहित ६ जना घाइते भएका छन्।
नक्कली सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक)का आधारमा उपत्यकामा सवारीसाधनको खरिद बिक्री भइरहेको खुलेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सानो भर्याङमा सोमबार एउटा नक्कली ब्लुबुक बरामद भएको छ ।
Previous articleआज (शुक्रबार) पनि बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ? Gold Price in Nepal
Next articleनववर्ष २०७९ मा चम्किँदै छ यी राशिको भाग्य, तपाइको कस्तो छ ?